FAQs - Zhangjiagang Icool pet teknolojia Co., Ltd.
Orinasa mpivarotra na mpanamboatra ve ianao?
Izahay dia matihanina mpanamboatra hety sy volo. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2000 ary manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny famokarana hety.
Manome fanandramana santionany ve ianao? Malalaka ve sa mandoa sarany fanampiny?
Matetika izahay manome anao santionany maimaim-poana ho an'ny 1-2 PCS (Afa-tsy ny fanaingoana), ny vidin'ny fandefasana dia mila ampandoavina. Ho an'ny hety sarobidy dia hampandoavinay ny sarany santionany mifandraika amin'izany ary esorinay ny volan'ny santionany amin'ny kaomandinao manaraka.
Inona avy ireo fitaovana ampiasainao amin'ny hety?
Amin'ny ankapobeny dia mampiasa fitaovana vita amin'ny vy japoney 440C tany an-toerana sy vy 9CR13 any an-toerana ho an'ny hety stilista avo lenta izahay, ary manao hety volo farany volo miaraka amin'ny VG10 Japoney. Ankoatr'izay, ny vy vy ao an-trano 6CR13 sy 4CR13 dia ampiasaina amin'ny hety mpianatra toekarena.
Azoko atao manokana ve ny manafatra ny hety?
Ie. Manakaiky ny 150 ny karazan-tànana fikirakirana samihafa sy ny volom-bolo am-polony amin'ny safidinao. Azonao atao ny manambatra ny tahonao ankafizinao amin'ny lelany mba hanaovana ny hety volo tsy manam-paharoa.
Ankoatr'izay, ny lelany dia tapaka an-tariby ary mikambana amin'ny tahony, mba hahafahanao mandefa ny santionany amin'ny hety na handefa ahy sary famolavolana ho an'ny famokarana hety.
Azoko atao ve ny manonta ny marika famantarana ny marika sy ny vokatra?
Eny, afaka manao izany ho anao izahay.
Manana MOQ ve ianao?
Miankina amin'ny vokatra ilainao ny MOQ. Raha ny stanao tianao hanafarana dia misy amin'ny tahiry, ny habetsaky ny kaomandy farany ambany dia mety ho 1pc. Raha tsy misy tahiry, azontsika atao ny mifampiraharaha amin'ny fatrany ambany indrindra.
Inona ny ora fanaterana anay?
Ho an'ireo style ao amin'ny tahiry, hatolotray azy ireo ao anatin'ny 5 andro aorian'ny fandoavana.
Ho an'ny fomba namboarina dia halefanay ny entana ao anatin'ny 45-60 andro aorian'ny fandoavana.